Mba mmadụ baara enyi ya bara uru (5, 6)
Nwa m, mee m obi ụtọ (11)
A na-eji ígwè amụcha ígwè (17)
Mara ìgwè atụrụ gị (23)
Akụnụba anaghị adịru ebighị ebi (24)
27 Ejila echi anya isi,N’ihi na ị maghị ihe echi ga-abụ.+ 2 Ka onye ọzọ* too gị, ejila ọnụ gị eto onwe gị. Ka ndị ọzọ* too gị, etola onwe gị.+ 3 Nkume na-anyị arọ, ájá dịkwa arọ,Ma iwe onye nzuzu na-akpasu mmadụ karịrị ha abụọ.+ 4 Ọnụma adịghị mma, iwe na-emebikwa ihe ka idei mmiri,Ma ekworo ka ha abụọ njọ.+ 5 Ọ ka mma ịbara mmadụ mba n’ihu ọha kama ịhụ mmadụ n’anya ma ghara igosi ya na a hụrụ ya n’anya.+ 6 Ọnyá ezigbo enyi mmadụ na-emepụ ya dị mma+Karịa ọnụ onye kpọrọ mmadụ asị na-esusu ya ọtụtụ ugboro.* 7 Onye afọ juru enweghịdị ihe o ji ezigbo mmanụ aṅụ kpọrọ,*Ma ihe na-elu ilu na-atọdị onye agụụ na-agụ ụtọ. 8 Nwoke hapụrụ ụlọ ya gbapụDị ka nnụnụ fepụrụ n’akwụ́ ya. 9 Mmanụ na ihe na-esi ísì ọma* na-eme ka obi dị mmadụ ụtọ. Ezigbo ndụmọdụ enyi nyere enyi ya na-emekwa ka obi dị enyi ya ụtọ.+ 10 Ahapụla enyi gị ma ọ bụ enyi nna gị,Abanyekwala n’ụlọ nwanne gị n’ụbọchị ọdachi dakwasịrị gị. Onye agbata obi nke nọ nso ka nwanne nke nọ n’ebe dị anya mma.+ 11 Nwa m, mara ihe ma mee m obi ụtọ,+Ka m wee zaa onye na-akwa m emo okwu.+ 12 Onye ma ihe hụ nsogbu, ọ na-aga zoo.+ Ma ndị na-amaghị ihe na-agara banye ná nsogbu, ha na-atakwa ahụhụ ya. 13 Chịrị uwe mmadụ ma ọ bụrụ na ọ nara onye ọ na-amaghị n’ibé. Nara ya ihe ibé ma ọ bụrụ nwaanyị na-ebi ndụ rụrụ arụ* ka ọ nara n’ibé.+ 14 Ọ bụrụ na mmadụ ejiri olu dara ụda na-agọzi mmadụ ibe ya n’isi ụtụtụ,A ga-ewere ya na ọ na-abụ onye ahụ ọnụ. 15 Nwaanyị nke na-esekarị okwu dị ka elu ụlọ nke na-ehi mmiri n’akwụsịghị akwụsị n’ụbọchị mmiri na-ezo.+ 16 Onye ọ bụla nke ga-ejiteli nwaanyị ahụ ga-ejideli ifufe,Ọ ga-ejidelikwa mmanụ n’aka nri ya. 17 Otú ahụ a na-eji ígwè amụcha ígwèKa mmadụ na-amụcha enyi ya.+ 18 Onye na-elekọta osisi fig ga-eri mkpụrụ ya,+A ga-akwanyekwara onye na-elekọta nna ya ukwu ùgwù.+ 19 Otú ahụ mmadụ na-ahụ ihu ya ma o lee anya na mmiriKa mmadụ na-eji ihe dị ya n’obi amata ihe dị mmadụ ibe ya n’obi. 20 Afọ anaghị eju ili nakwa ebe ndị mmadụ na-anọ erekasị,*+Afọ anaghịkwa eju anya mmadụ. 21 Otú ahụ a na-eji ite na ọkụ anụcha ọlaọcha na ọlaedo+Ka a na-eji otuto a na-eto mmadụ amata ụdị onye ọ bụ. 22 Ọ bụrụgodị na i jiri ọdụ sụrie onye nzuzuOtú e si asụri ọka n’ikwe,Nzuzu ya agaghị apụ ya apụ n’ahụ́. 23 I kwesịrị ịma ìgwè atụrụ gị nke ọma. Na-elekọta atụrụ gị nke ọma,*+ 24 N’ihi na akụnụba anaghị adịru mgbe ebighị ebi,+Okpueze anaghịkwa adịru ọgbọ niile. 25 Ahịhịa na-akpọnwụ, ahịhịa ọhụrụ epupụta,A na-egbutekwara anụmanụ ahịhịa ndị dị n’ugwu. 26 Ị na-esi n’ebule enweta uwe gị,A na-ejikwa mkpi akwụ ụgwọ ala. 27 A ga-enwekwa mmiri ara ewu ga-ezuru gịNa ndị ezinụlọ gị nakwa ụmụ agbọghọ na-ejere gị ozi.
^ Na Hibru, “onye bịara abịa.”
^ Na Hibru, “onye mba ọzọ.”
^ O nwere ike ịbụ, “ọnụ onye kpọrọ mmadụ asị na-esusu ya nke na-esighị ya n’obi.”
^ Na Hibru, “na-azọ mmanụ aṅụ ụkwụ.”
^ Na Hibru, “insens.”
^ Ma ọ bụ “onye mba ọzọ.”
^ Ma ọ bụ “Shiol na Abadọn.”
^ Ma ọ bụ “Mee ka obi gị dịrị n’ebe atụrụ gị nọ.”